FAHAFATESAN’NY MOPERA NICOLAS RATODISOA : Tonga nitsapa alahelo teny Andohalo ny mpikambana ao amin’ny governemanta
« Varavarana nivoahana ny an’ny Fiangonana Katolika Apostolika Romanina fa ny fahoriana kosa niarahan’ny malagasy rehetra nizaka ». 17 février 2019
Izay no azo amehezana ny fihetsika nasehon’ny mpikambana eo anivon’ny governemanta manoloana ny nahafatesan’ny mopera Nicolas Ratodisoa, na mopera Nicolas Soanavela, izay maty noho ny hetraketraky ny jiolahy. Ny Sabotsy tolakandro teo tamin’ny 4 ora sy sasany tany ho any no tonga teny amin’ny Salle d’eouvre Andohalo ny nofo mangatsiakany rehefa nandrasana indray alina teny amin’ny Ekar Notre Dame de l’Assomption Mahitsy. Adiny iray talohan’izay dia efa tonga teny an-toerana ireo minisitra maromaro, mpikambana eo anivon’ny governemanta, niandry ny fahatongavan’ny razana teny an-toerana.
Tsy nijanona ho nangina fotsiny ny fitondram-panjakana fa tonga nisolo tena ny vahoaka malagasy naneho ny fiaraha-miory tamin’ireo raiamandreny eo anivon’ny Fiangonana Katolika sy ireo kristianina ary ny fianakavian’ny mopera Nicolas tonga niondrika am-panajana manoloana ny fahalasan’ity pretra ity. Minisitra efatra ambin’ny folo mianadahy izy ireo no tonga niondrika nanoloana ny vatana mangatsiakan’ny mopera Nicolas teny Andohalo. Ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta moa izay tsy eto an-toerana fa namita iraka ka dia nampitondra ny teny fialan-tsiny. Tsy ambakan’izany ny Filoham-pirenena izay nampitondra ny teny fiombonam-po sy fankaherezana tanteraka amin’ny mpitondra fiangonana katolika sy ireo fianakavian’ny mopera.
Notifirina sy nohitsakitsahin’ireo jiolahy i mopera Nicolas
Raha tsiahivina ny zava-nitranga dia ny sabotsy 9 febroary teo no nisy mpivarotra iray voatafiky ny jiolahy teny Mahitsy. Voatifitra tamin’io fotoana io ny tompon’ilay tranom-barotra. Tsy tana ihany koa ny ain’ity farany. Sendra nandalo, avy nanatitra saktramentan’ny marary i Mopera Ratodisoa Nicolas no nifanehitra tamin’ireo jiolahy. Raha ny fitantaran’ity Pretra ity tamin’ny fianakaviany fony fahavelony dia nanery azy hamoaka izay vola tany aminy ireo jiolahy. Namaly am-pahatsorana anefa i mopera « fa mopera izy ary avy nanatitra sakramenta ho an’ny marary ka tsy misy vola any aminy ». Tsy nino ary tsy nanaiky izany fanazavany izany ireo jiolahy fa nanompa sy nitrerona azy ary nitifitra azy teo amin’ny ilan-kibony.
Tsy vitan’izay fa rehefa lavo tamin’ny tany ity pretra dia mbola narahana hitsakitsaka ihany koa, hoy hatrany ny fanazavan’ny fianakaviany. Olona tsotra sady mamy hoditra tamin’ny mpiara-belona taminy i mopera Nicolas Todisoa. Raha araka ny vaovao voaray avy eo anivon’ny zandary dia ahiana ho misy zandary niray petsapetsa tamin’iny fanafihana namoizana ain’olona roa teny Mahitsy iny. Eo andalam-panamarinana tanteraka izany ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ankehitriny koa antenaina fa hihatra araka ny rariny sy ny hitsiny amin’ireo nahavanon-doza ny lalàna.
I R.P Nicolas Ratodisoa dia teraka tamin’ny 14 novambra 1981, nandray ny fanamasinana ho mpisorona tamin’ny 21 aogositra 2016 ary nodimandry ny zoma 15 febroary 2019 lasa teo. Omaly tamin’ny 2ora sy sasany dia nisy ny Eokaristia masina, fisaorana an’Andriamanitra sy fanaovam-belona azy farany teny amin’ny Ekar Paroasy Katedraly Andohalo. Taorian’izay dia nentina nihazo ny fasan’ny misiona Ambohipo ny nofo mangatsiakany. Izahay ekipa rehetra eto amin’ny Gazety Ino Vaovao Faritra sy La Vérité dia maneho fiaraha-miory tanteraka amin’ny Fiangonana Katolika.
Telo mianadahy efa nahazo 160 tapitrisa Ariary nadoboka am-ponja vonjimaika FISOLOKIANA (123) 18 juin 2019 Niakatra Fitsarana ireo zandary telo voarohirohy KOLIKOLY TENY AMIN’NY LALAM-PIRENENA RN4 (105) 17 juin 2019 Nahazo ny maro an’isa ny kandidà avy amin’ny IRD VOKATRA VONJIMAIKA FENO NAVOAKAN’NY CENI (87) 18 juin 2019 Depiote teo aloha miisa 50 no ho tafaverina raha tsy miova tamin’ny voka-pifidianana ANTEMIERAM-PIRENENA (84) 18 juin 2019 Tratra ny mpamily kamiao nitondra entana halatra milanja 8 taonina ASAN-JIOLAHY TOAMASINA (83) 18 juin 2019 Natontongan’ny IRD ny TIM tao Vakinankaratra FIFIDIANANA DEPIOTE ANTSIRABE II (82) 18 juin 2019